Maninona ny marketing Influencer no mety ho tetikady manaraka anao | Martech Zone
Maninona ny marketing Influencer no mety ho tetikadinao manaraka
Alahady, Martsa 29, 2015 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Rehefa niresaka aho marketing marketing tao amin'ny World Media Marketing World, notifirin'ny fangatahana sy ny adihevitra mitohy nifanaovana tamina orinasa maro aho nandritra ny fihaonambe. Nanana efitrano feno olona aho ary nanana olona marobe nanaraka ahy tsy ho eo amin'ny famelabelarana ho an'ny fanontaniana fanampiny aorian'ny fivoriana.
Nozaraiko ny horonantsary rap izay Rappitt natao ho ahy - izay nahatratra mpihaino marobe lavitra izao nefa tsy mila manonitra ahy ho influencer satria nokendreny ho ahy izy ary nataony ho ahy ilay horonantsary. Niresaka momba ny fampivelarana tantara sy paikady hiantohana ny fahombiazana amin'ny influencer aho ary hivoaka rehefa tsy mandeha izy ireo. Ary nanome valiny vitsivitsy momba ny fitantarana tantara izay hanampy ny influencer hiresaka bebe kokoa momba ny vokatra na serivisy tadiavinao hizaran'izy ireo.
Ny marika toa ny Influencer Marketing satria afaka manome tanjona isan-karazany (ankoatry ny tanjona miharihary indrindra, fampitomboana ny varotra): laharam-pejy, fisondrotana, tsy fivadihan'ny mpanjifa, taranaka UGC, fitomboana amin'ny fantsom-piarahamonina, virtoaly atiny ary maro hafa. Tian'ireo mpanjifa izany satria tena marina izany. ARY atolotra azy ireo amin'ny fotoana mety izany. Rehefa mizaha bilaogy iray momba ny haingon-trano ny mpanjifa… izany no fotoana mety indrindra hanolorana azy ireo misy rohy mankany amin'io seza Eames io (asongadin'n ny marika misy anao izao), izay aseho ao anatin'ny tontolon'ny tranon'ny mpiorina itokisana. Ity fomba fiasa ity dia mahomby kokoa noho ny mandefa mailaka spammy azy ireo amin'ny maraina… raha vao manomboka miasa izy ireo.
Ny singa iray lehibe amin'ny fitadiavana influencer dia tsy fanakorontanana fitaomana amin'ny fahatongavana na laza. Ny fanarahana be dia be dia tsy midika hoe ny mpihaino na ny vondron'olona dia handeha hividy ny vokatrao na serivisinao. Raha ny tena izy, na dia maro aza ireo antsoina hoe influencer dia manana laza malaza - tsy midika akory izany fa mety hisy fiatraikany amin'ny fitondran-tena mividy ireo izay manaraka azy ireo.
Ilaina tokoa ny mahita olona manana mpihaino mifanentana aminy izay afaka mampiroborobo ny vokatrao na serivisinao fotsiny - fa mitaona ny mpanaraka sy hitarika azy ireo amin'ny orinasanao ahafahanao mamadika azy ireo avy eo. Tsy mivarotra ny fitaomana, ny teny hoe fitaomana dia avy amin'ny teny ara-bakiteny mikoriana. Ny asan'ny influencer dia ny mitarika ny fivezivezena aminao hahafahanao mampiasa ny fahatokisana sy ny fahefana efa natsangan'ny influencer ary ampiasanao azy ho anao.
Ny talantalana namolavola ity infografika ity ary sehatra marketing eo amin'ny sehatry ny marketing izy io hahafantarana sy hifandraisanao amin'ireo influencers ary handrefesana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra atao
Tags: marketing marketingpaikady marketing influencerny talantalana
Fomba tsotra 6 hanatsarana ny fiantraikan'ny varotra atiny